Social Media Do's na Ihe Emela | Martech Zone
Social Media Do na-eme
N'abalị ọzọ, ana m agwa onye ahịa ọzọ okwu, anyị na-ekwukwa banyere mgbasa ozi mmekọrịta, ihe omume, na nsonaazụ ya. Ọ na-agwa m otu ọ hụbeghị nsonaazụ sitere na mgbasa ozi mmekọrịta iji mee ka ọ baa uru. N'ikwu eziokwu, enweghị m ike ịsị na ekwenyeghị m. Ọ bụ ezie na profaịlụ ọkachamara m na azụmaahịa m na-aga n'ihu na-eto, ndị mmadụ nwere ike ịchọpụta na ịgbaso m na soshal midia anọwo na-ada oge.
N'ihe niile na-eme ihe n'eziokwu, oge m niile na mgbasa ozi mgbasa ozi bụ na mkparịta ụka nzuzo na mpụga netwọkụ ọkachamara m. M na-ekere òkè kwa ụbọchị na mkparịta ụka ọkachamara, mana nke ahụ bụ akụkụ dị nta nke ojiji m.
Ọ pụtara na ọ baghị uru? Ee e, ọ bụghị n'ezie. Anaghị m arụsi ọrụ ike monetize m na-elekọta mmadụ mgbasa ozi na-ege ntị ya mere na ọ bụghị ihe m na-efunahụ ego na. Na, n'eziokwu, achọghị m ịre ahịa na mgbasa ozi mmekọrịta. M na-ahapụrụ ego na tebụl? Ikekwe - mana ọnụ ọgụgụ buru ibu nke usoro mgbasa ozi ọha na eze na-eso ma e jiri ya tụnyere ndị na-ege ntị bụ ndị ga-azụ m ahịa na-agabiga.
Ihe ndị na-esonụ na-enye bụ iru m chọrọ iji nweta ide na ohere ikwu okwu. Ndị mmadụ na-ahụ ọnụ ọgụgụ buru ibu, ya mere ha megheere m ọnụ ụzọ ha. Mgbe m nwere ohere ndị ahụ, ha na-eweta ego ha na-enweta. Ya mere - n'ikpeazụ m na-erite uru na ojiji m na-elekọta mmadụ? Echere m otu ahụ!
M ga-akwụsị ịre ahịa na itinye n'ọrụ na mgbasa ozi mmekọrịta? Kpomkwem - ọ ka bụ ọwa ebe ndị na-ege m ntị dị, obodo na-agbakwunye uru ọrụ m, yana ebe ndị mmadụ na-eme mkpebi nzụta azịza. Ọ bụghị naanị ozugbo or uru dị ka ọwa ndị ọzọ dị m. Achọpụtara m na enwegoro m mgbasa ozi mmekọrịta m na ibe m mgbe m jikọtara ya na azụmaahịa mgbasa ozi na mgbasa ozi karịa iji ya dị ka ọwa silo'd, yabụ ọ bụ otu anyị si ejikwa ma mepụta atụmatụ mgbasa ozi anyị.
Netwọk mmekọrịta bụ nnukwu ebe iji kwalite ọrụ gị na azụmaahịa gị - ọkachasị ndị ahịa ahụ na-enyocha ọwa site na iji ahịrịokwu, okwu na hashtags - mana ha abụghị ebe ere ere ka ọ dị mkpa inwe ezigbo mmekọrịta. Havekwesịrị ịzụlite ntụkwasị obi na nghọta na ndị ahịa nwere ike.
Ndị folks na Insurance Octopus arụ nnukwu ọrụ ebe a ijikọ ọnụ ezigbo usoro mgbasa ozi kacha mma na infographic a na atụmatụ, ojiji, hashtags, ndị na-ege ntị na ojiji ọdịnaya. Ọ bụ ezigbo ndụmọdụ!
Tags: ndụmọdụ mgbasa oziusoro mgbasa ozi kacha mmaelekọta mmadụ media na-eme na don'ts
3 stotụnanya Stats akwado Social ere
Doug, ihe ọmụma dị ukwuu post bara uru.